Amiir u dhashay Dalka Qadar oo xabsi ugu jiro Dalka Imaaraadka Carabta – Hornafrik Media Network
Amiir u dhashay Dalka Qadar oo xabsi ugu jiro Dalka Imaaraadka Carabta
By HornAfrik	 On Jan 15, 2018
Amiir u dhashay Dalka Qadar ayaa sheegay in uu Maxbuus ku yahay magaalada Abuu Dubai ee Dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta una xiranyahay dhaxalsugaha Imaaraadka Maxamed Bimn Salmaan Al-Nahyaan oo uu marti u ahaa markii hore.
Hadda waxaan ku suganahay abuu dubai waxaan marti u ahaa dhaxalsuge Maxamed,laakiin waxbadan marti ma sii ahaan doono,waxaan ahay maxbuus u xiran dowladda Imaaraadka waxaa uu sheegay in uu xariggan ku muteystay aragtidiisa godoominta dalkiisa ee ay saareen Waddamada Khaliijka.
Sheekh Cabdalla Bin Al thaani ayaa sheegay in dadka dalkiisa ay yihiin dhibbaneyaal ay Carabta godoomisay waxaana uu aad ugu calaacalay in arrintaas ay tahay shey xun.
Bishii September kulan Wasiirrada arrimaha dibadda Carabta ku yeesheen Qaahira ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Qadar waxaa uu kulankaas ka sheegay in waddamada godoomiyay dalkiisa ay doonayaan in ay beddelaan Amiirka Qadar kuna beddelaan Sheekh Cabdalla Bin Al-Thaani oo Abu Dubai ku sugan.
Ciidanka Dowladda Oo Howlgalo ka wada Magaalada Balad Weyne.